Shirka AU oo dhamaaday - BBC News Somali
Shirka AU oo dhamaaday
27 Luulyo 2010
Image caption Shirka Midowga Afrika ayaa maanta la soo gabagabeeyay
Shir madaxeedka Midowga Afrika ayaa lagu soo gabagabayeey magaalada Kampala ee dalka Uganda. Gabagabadii shirka waxaa hoggaamiyeyaasha ay soo saareen qoraal qeexaya qodobada ay isku afgarteen oo ay ku jiraan ansixinta go'aamadii urur goboleedka IGAD ee xaaladda Somalia, jawaab ay ka bixiyeen amarka maxkamadda caalamiga ee ICC eek u saabsan in la soo qabto hoggaamiyaha Sudan, iyo arrimo kale.
Saddex maalmood oo ay kulamo adag yeelanayeen kadib, ayaa hoggaamiyeyaasha qaaradda Afrika waxay caasimada dalka Uganda ee Kampala ku soo gabagabeeyeen shir madaxeedkoodii caadiga ahaa, kaas oo ay ku gorfeeyeen umuuro dhowr ah oo dalalkooda ka taagan.
Shirka Kampala oo arrimaha dhinaca amaanka, gaar ahaanna xaaladda Somalia, muhiimad gaar ah la siiyey, ayaa markii galabta la soo gabagabeeyey waxaa laga soo saarey qodobo dhowr ah oo la xiriira Somalia, Sudan iyo horumarinta adeegyada caafimaadka ee hooyada iyo dhalaanka qaaradda.
Dhanka Somalia, Madaxda Afrika waxay isku raaceen isla markaana ansixiyeen qaraarkii ka soo baxay urur goboleedka IGAD ee ciidamada nabad ilaalinta loogu kordhinayey Somalia.
Qaraarkaasi waxaa uu dhigayey in ilaa 20,000 00 ciidan loo diro Somalia si ay u taageeraan DKMG ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Shariif Sheikh Axmed.
Goaankani waxaa si weyn ugu ololeynayey ansixintiisa Madaxweynaha Uganda oo isagu doonaya in la baabiiyo kooxda Islaamiyiinta Somalia ee Al-Shabab , oo sheegatey weerarkii Kampala ka dhacey bishan 11keeda oo ay 76 qofood ku naf waayeen.
Midowga Afrika waxay shaley ku dhawaaqeein inay ciidan laba kun gaaraya u dirayaan Somalia, isla markaana awood loo siinayo ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM inay dagaalami karaan amaba ay ka hortagi karaan weeraro ku soo fool leh.
Madaxweyne Museveni oo arintaa ka hadlaya ayaa BBCda u sheegey in awoodihii hore ee ciidamada nabad ilaalinta Somali jooga ay ahaayeen kuwo ay ku jahwareereen ciidamada , isla markaana talaabada haatan la qaadey ay waddada u xaareyso inay hawl wanaagsan qabtaan.
Madaxda Afrika waxay kaloo isku wada raaceen inay ka soo horjeestaan goaanka Maxkamadda Caalamiga ee ICC ku dooneyso in lagu soo xiro Madaxweynaha Sudan, Gen Cumar Xasan Al-Bashiir oo lagu eedeynayo inuu dembiyo dagaal ka geystey gobolka galbeedka dalkiisa ku yaala ee Darfur.
Midowga Afrika waxay sheegeen in goaankaasi uu meel ka dhac ku yahay qawaaniinta caalamiga oo xarimaya in dacwad lagu soo oogo hoggaamiye shacabku ay soo doorteen oo weli xilka haya.
Talaabadan waxay meesha ka saareysa warar soo baxayey oo sheegayey in hoggaamiyeyaasha ay ku kala qeybsanaayeen mowqifka ay ka qaadanayaan arinta Al-Bashiir. Waxaana haatan dal walba oo Afrikan ah laga doonayaa inuu iska dhegatiro amarkaasi isla markaana aanu wax wada shaqeyn ah oo ku aadan fulinta xarigga Al-Bashiir u fidin ICC-da.
Qodobka ugu weynaa shirweynahan ka hor intaaney madaxdu agendahooda weyn ka dhigan arrimaha amaanka, oo ahaa daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhalaanka, ayaa waxaa la goaamiyey in dal walba oo Afrikan ah uu miisaaniyaddiisa boqolkiiba 15 ku bixiyo daryeelka caafimaadka ee hooyada iyo dhalaanka, waxaana goaankan looga gol leeyahay in lagu yareeyo dhimashada hooyada iyo dhalaanka oo weli u muuqata mid aad u sareysa Afrika, marka la barbardhigo dunida inteeda kale.
Walow goaamadan la wada qaatey dhan marka laga eego ay yihiin kuwo muhiim ah, ayaa hadana walaaca ugu weyn ee la qabaa waxaa uu yahay fulintooda, maadaama madaxda Afrika ay horey ugu guul dareysteen dhaqangelinta qodobo muhiiim ah oo ay ku ansixiyeen shirarkii kan ka horeeyey ee ay yeesheen.